Madaxweyne Siilaanyo oo Kulan Casho Sharaf u Sameeyey Ciyaaryahanaddii Ku ciyaarayey Magaca Goballada Somaliland+SAWIRO | Saxil News Network
Madaxweyne Siilaanyo oo Kulan Casho Sharaf u Sameeyey Ciyaaryahanaddii Ku ciyaarayey Magaca Goballada Somaliland+SAWIRO
Hargeysa(Saxilnews)Madaxweynaha oo munaasibad aad loo qurxiyey ku qaabiley ciyaar yahanada gobolada dalka ayaa khudbad ka jeediyey madashaasi, waxaanu yidhi madaxweynuhu “Ciyaartoygiinan Cawada Badan, Sharaf weyn bay ii tahay, in aan caawa idinku marti-qaado Xarunta Madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland, oo ah Qasriga looga taliyo qarankeena. Mar labaad, waxaan jecelahay inaan halkan ka hambalyeeyo Ciyaar-yahannada kala duwan ee ka soo qayb-galay Tartanka Ciyaaraha Gobollada Somaliland. Sidoo kale, waxaan boggaadinayaa Mas’uuliyiinta Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha, Xidhiidhada Ciyaaraha kala duwan, iyo Garsoorayaasha, kuwaas oo door weyn ka qaatay isku-dubaridka iyo qabsoomidda Tartankan Ciyaaraha Gobollada Dalka. Mar Kale, waxaan hambalyeynayaa Xulka Ciyaartoyga Kubadda Cagta iyo Kubadda Kolayga ee Gobolka Awdal, Gobolka Gabiley, Gobolka Hawd, Gobolka Saaxil, Gobolka Daad-madheedh, Gobolka Sool, Gobolka Sanaag iyo Xulka Ciyaartoyga Gobolka Xaysimo. Gobolladaas oo ah kuwii u soo gudbay wareegii labaad ee Tartanka Ciyaaraha. Waxaa kale oo aan hambalyeynayaa Xullalka Ciyaartoyga Kubadda Kolayga ee Gobollada Maroodi-jeex iyo Togdheer oo iyaguna u soo gudbay wareega labaad. Dhinaca kale, waxaan hambalyeynayaa Ciyaaryahannadii Gobolladii ku hadhay wareegii koowaad ee tartankii Ciyaaraha Gobollada ee ka dhacay Magaaladda Boorama, iyo Burco.
Ujeeddada Ciyaaraha loo qaban-qaabinayaa, ma’aha oo keliya maaweelo iyo madadaalo, balse nuxurkeedu waa mid ka gun-dheer. Tartannada kala duwan ee ciyaaraha, siyaasadda aynu ka leenahay waxa bud-dhig u ah, in ay is-dhex-galaan, isla markaana is-bartaan dhallinyarada ciyaartoyga ahi. Waxa kale, oo aynu kula dagaalamaynaa inay dhallinyarada ka mashquuliso balwadda, tahriibka, rabshadaha, ku-biirista kooxaha xag-jirka ah iyo qabyaaladda. Adeerayaal, Waxaynu leenahay jidhka caafimaadka qaba, ayuu caqliga caafimaadka qabaa ku jiraa. Sidaa darteed, waa in aynu xoojinaa tartannada ciyaaraha.